हेपाटाइटिसका बिरामी बढ्दै : के हो हेपाटाइटिस र सर्छ कसरी ?
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 11 months ago July 27, 2018
पछिल्लो समय हेपाटाइटिसका बिरामी बढ्दै गएका छन् । विभिन्न संक्रमणका कारण कलेजोमा सुन्निने अवस्थालाई बुझिन्छ । कलेजोमा ‘हेपाटोट्रोपिक भाइरस’का कारण हुने संक्रमण नै हेपाटाइटिस हो ।
हेपाटाइटिसलाई ‘ए’देखि ‘इ’सम्म गरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । चिकित्सकका अनुसार तुलनात्मकरुपमा हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी गम्भीर मानिन्छन् । नेपालमा करिब चार लाख हेपाटाइटिसका बिरामी भएको अनुमान छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमण बढिरहेको बताउनुहुन्छ । ‘अन्य हेपाटाइटिसभन्दा ‘बी’ बाट बढी संक्रमित भइरहेको तर यसबारे धेरैले ध्यान नदिएकाले यसबारे विषयमा बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय हरेक दिनजसो टेकु अस्पतालमा हेपाटाइटिस ‘बी’ का संक्रमित आउने गरेको र यौनसम्पर्क र रगतका माध्यमबाट हुने यस रोगबारे धेरै व्यक्ति अनभिज्ञ भएकाले उपचारमा पनि निकै कम आउने गरेको बताउनुभयो ।
ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. अखिलेशकुमार कश्यपले नेपालमा कूल जनसंख्याको तीन लाख ८० हजार तर्थात् दुई लाख ५० हजार मानिसमा हेपाटाइटिस बी र करीब एक लाख ३० हजार मानिसमा हेपाटाइटिस सी भएको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बी र सी हेपाटाइटिसका कारण हरेक वर्ष संसारका १३ लाख मानिसको मृत्यु मृत्यु हुन्छ ।’ क्यान्सरबाट मृत्यु १२ जनामध्ये एक जना कलेजोको क्यान्सरबाट मृत्यु हुन्छ । डा. कश्यपले एआइभी एड्स, क्षयरोग र मलेरिया नियन्त्रण र उपचारमा लगानी गरे पनि हेपाटाइटिसमा ध्यान नदिएका कारण यसबाट हुने मृत्युदर बढिरहेको बताउनुभयो ।